musha Kanadha Politicians Kaycee Madu Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Biography yaKaycee Madu inokuudza Chokwadi pamusoro pehucheche Nyaya Yake, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Mudzimai, Vana, Mararamiro, Net yakakosha uye Hupenyu hwePamoyo.
Zvichitaurwa zviri nyore, ndiko kuongorora kwakazara kwerwendo rwake kubva pamakore ekuzvarwa, chaipo kudzamara ave mukurumbira
Hongu, sezvakangoita Justin Trudeau, pamwe wakamuziva mushure mekukwira kwake muCanada Political space.
Iwe ungangove uchiziva kuti ane rukudzo semutema wekutanga akasarudzwa kuva gurukota rezvemitemo uye gweta-mukuru weAlberta, Canada.
Kunyangwe kuzivikanwa, isu tinoziva kuti Kaycee Madu's Biography iri shoma. Pasina imwezve ado, ngatitangei nenyaya yake inonakidza yehupenyu.
Kaycee Madu Yemwana Nhau:
Kutanga, zita rake; Kaycee izita rezita rekuti Kelechi. Kaycee Mady akazvarwa pakati pemakore emakore 1973-1974 uye akakurira muSouth-kumabvazuva kweNigeria kuvabereki vasina dzidzo yepamutemo.
Baba vaKaycee Madu- vane makore angangoita makumi mapfumbamwe ekuberekwa (sa90), vaimbove mutengesi mudiki uye murimi.
Kuva nehuremu hwakaderera uye vabereki vasina kuverenga. Iye zvino wezvematongerwo enyika weCanada aimbova chap wechidiki aishuvira hukuru.
Kaycee Madu akadzidza kukosha kwekushanda nesimba, kuvimbika, kuvimbika, uye chiremerera kubva kuvabereki vake. Aive aine vanopfuura vanin'ina ve10 vachiri kukura.
Kaycee Madu Yemhuri Mhemberero:
Kungofanana nevazhinji vekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwevaNigeria. Kaycee Madu akarererwa mumhuri yenyukireya.
Amai vake nababa, vese vakaita basa rakaoma mukuita mabhizinesi akasiyana siyana kuti vape kugadzikana mune zvemari sezvavanogona.
Kaycee Madu Mhuri Yakatangira:
Kunyangwe hazvo zita rake richirira kudaro Chirungu, wezvematongerwo enyika ane midzi yakadzika muAfrica.
Vabereki vaKaycee Madu maNigeri uye anobva kwake kuUmuokirika, nharaunda iri muAhiazu-Mbaise nharaunda yehurumende yenharaunda yeImo State, South-kumabvazuva kweNigeria.
Mepu yeNigeria inoratidza yaKaycee's Madu Yemhuri Yemhuri.
Wezvematongerwo enyika akabva kuNigeria mu2005 uye akazove muCanada nekuzvarwa. Nhasi, Kaycee Madu muNigerian-akaberekerwa kuCanada anogara muEdmonton, dunhu reCanada reAlberta.
Kaycee Madu Dzidzo:
Iine Vabereki vane dzidzo yepamutemo, mhuri yaKaycee yagara iine hunhu hwedzidzo nekuremekedza kukuru. Imba yaive neshungu yekuita zvakanakisa kubva muhupenyu munzira yekuverenga.
Kunyangwe isu tichiri kuziva uko Kaycee Madu aive nedzidzo yake yepuraimari nesekondari (Technical School (SETESCO) Obohia), zvingangodaro kuti akapinda chikoro chimwe chete neumwe wehanzvadzi dzake.
Kaycee apedza dzidzo yepamusoro akabudirira kuita Bachelor of Laws Honors Degree kubva kuYunivhesiti yeLagos muna 2001. Akazotamira kuCanada mugore ra2005 nemumwe wake mushure mekudaidzwa kubhawa.
Dzidzo yaKaycee Madu- Iye Wezvematongerwo enyika weCanada akapedza kudzidza UNILAG.
Kaycee Madu Biography Nhau:
Wezvematongerwo enyika weCanada, sevazhinji veNigeriya vakaenda kuCanada, aive akatsunga kubudirira mumusha wake mutsva. Mushure mekuenda kuNigerian Law School muAbuja, Nigeria, ndokuzosheedza kubhawa, Madu nemukadzi wake vakatamira kuCanada kuti agone kudzidzira Mutemo.
Makore mashoma mushure mekugara muCanada, akatanga kambani yemutemo- Tisel Mutemo Hofisi muAlberta. Chinangwa chaive chekupa yakakwira-mhando vatengi-yakatarisana nemutemo masevhisi. Asina makore mana (4) makore muna 2009, Kaycee akapinda pakati pechikwata chakagamuchira Mubairo wePremier weKubwinya Mubairo.
Uku ndiko kucherechedzwa kunochengeterwa Alberta Veruzhinji Vashandi veVashandi vevashandi vepamusoro vatengi uye bhizinesi-kugona tsika.
Kaycee Madu's Bio - Kumuka Mukurumbira:
Shure kwaizvozvo, Gweta rakazvarwa muNigeria rakatanga kushanda munzvimbo dzakasiyana muPublic service. Madu akamboshanda semukuru wezvehunyanzvi chipangamazano kuHurumende yeAlberta munzvimbo dzemitemo uye ongororo dzemitemo.
Kunyangwe kuve mutongi wemutemo kwaisave kuda kwake kukuru, moyo waKaycee wevagari veAlberta wakazomutungamira mune zvematongerwo enyika.
Pakutanga mune rake basa rezvematongerwo enyika, Kaycee Madu akaita mushe mukushanda uye zvine hungwaru zvirongwa zveveruzhinji zvine chekuita nenyaya dzekugadzirisa uye kubvunzurudza kwevanobata
Pa 16th yaApril 2019, akasarudzwa kumusangano wezvematongerwo enyika weAlberta kunomiririra dunhu resarudzo reEdmonton-South West.
Nguva pfupi gare gare, akagadzwa segurukota redzimhosva. Madu, musi wa25 Nyamavhuvhu, akave wekutanga Africa kugadzwa Gurukota rezvemitemo uye Gweta Guru reAlberta, Canada. Vamwe vese, sekutaura kwedu kwemutungamiriri wechokwadi, yave nhoroondo.
Wekutanga Africa akagadzwa segurukota rezvemitemo uye Gweta-General reAlberta, Canada.
Nezve Mudzimai waKaycee Madu:
Iye Wezvematongerwo enyika weCanada achiri kuYunivhesiti yeLagos, akasangana nemukadzi wake uyo anoenda anonzi Emem Madu. Saiye, iye zvakare gweta uye Gweta.
Magweta ese ari maviri aiita Mutemo pakambani yemhuri yavo- Tisel Law office muAlberta.
SaGweta rakanaka, mudzimai waKacee Madu (Emem) anozvipira zvinechido kune zvakanakira vatengi vake. Anoratidzwa pazasi, iye-wenguva-imwe mudzidzi weakakurumbira Queen's College muLagos, Nigeria.
Sangana naEmem Madu- Mukadzi waKaycee.
Kufanana nemurume wake, Emem akawana iye Bachelor of Laws (LL.B.) kubva kuYunivhesiti yeLagos (gore 2002 set). Mukadzi akangwara akabuda aine Yekutanga Kirasi Honours Degree kubva kuNigerian Law School mu2003. Mushure mekutama naKaycee kuenda kuCanada.
Akawana Masters of Laws (LL.M.) ake paUniversity yeAlberta muna 2007. Muchato pakati paKaycee naEmem unokomborerwa nevana vatatu.
Kaycee Madu Hupenyu Hwemhuri:
Aine zvakawanda zvekushushikana nezve zvine chekuita nezvido zvemumba, (chikafu nehutano, nezvimwewo), Kaycee, nevamwe vake gumi (10) vanin'ina vaifanira kunetseka kufunga, kuverenga nekudzidza.
Izvi zvakauya nerutsigiro ruzere rwevabereki vavo vakatsunga uye vanoshingairira. Muchikamu chino, isu tinokanda zvimwe chiedza kuna baba vake naamai.
Zvimwe Zvakawanda Nezvevabereki vaKaycee Madu:
Vanababa zvirokwazvo manhenga evana kuti vabhururuke uye Baba vaKaycee havana kunge vari vamwe. Iwe zita rake rizere harisati rajeka, iye pamwechete naAmai vaive nevana gumi nerimwe (11).
Sezvambotaurwa, kunyangwe isina kudzidza. Vakazviita poindi yebasa kudzidzisa basa rakaoma uye Maitiro edzidziso muvana vavo.
Kungofanana nevakawanda vanobva kuMbaise (Nigeria), vabereki vaKaycee Madu vaive varimi vanoshingaira. Baba vake, avo vari kumakore ake makumi mapfumbamwe vaive zvakare mutengesi mudiki.
Zvizhinji Nezve Vana vaKaycee Madu:
Semakorona kumusoro, ndizvo zvakaita vana kuvabereki vavo. Kuroora kwaBarrister Madu naEmem kwakabereka vana vatatu (3) vana vane mazita; Adanaya, Chisom, uye Ugonna. Tsvaga pazasi, yakanaka yemhuri pikicha yaKaycee Madu.
Sangana neMhuri yaKaycee Madu.
Zvimwe Zvizhinji nezveKaycee Madu's Siblings:
Kunyangwe Kaycee Madu aine gumi nemana (11) hama nehanzvadzi vanoziva zvishoma nezvavo. Zvisinei, pakati pehama dzake, hanzvadzi yake chete mukuru anonzi Mai Eucharia Anyanwu (nee Madu) ndiye anozivikanwa.
Chirevo chepamhepo chine kuti Eucharia akaenda Sekondari technical School Obohia, Ahiazu-Mbaise, Imo State, Nigeria.
Sangana nemumwe wehama dzaKaycee, Eucharia Anyanwu.
Iye anodanwa kunzi mukadzi wekutanga, saKaycee, anozivikanwawo nehungwaru uye hunyanzvi hwehutungamiriri hwepamusoro. Panyaya yebasa, Eucharia Anyanwu mushandi wechigadzirwa che diaspora banking mune rimwe remabhangi anotungamira muNigeria.
Kaycee Madu Hupenyu Hwega:
Muchikamu chino, tichaita kuti unzwisise hupenyu hwake kunze kwezvematongerwo enyika nemutemo. Kutanga nezvaanofarira, Kaycee Madu anofarira nhetembo, nhabvu, kufamba, uye zvine hungwaru zvidzidzo zvemauto.
Iye anodawo tsika yake yemhuri sezvo ari iye wechokwadi nhengo yeAlberta yeNigerian uye Igbo nharaunda.
Zvakare pane zvinyorwa zvemunhu oga, Kaycee munhu ane hunhu uye anoteedzana anochengetedza uyo anotenda murusununguko rwakakosha rwevose. Sezvinoonekwa pazasi, iye anoda kushamwaridzana neboka rega rega.
Madu panguva yekupihwa kwechikafu chekudyisa ma56,000 eAlbertans panguva ye2020 denda.
Kaycee Madu's Lifestyle:
Kunyangwe sekuziva kwedu mhuri yake inogara kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweEdmonton, Alberta, mota dzake uye Imba mhando hazvizivikanwe.
Chokwadi ndechekuti, Kaycee ari pakati pevanhu vane mukurumbira muAlberta, Canada. Iye murume anowanzo kunzi wechipiri kune Mutungamiriri weAlberta anorarama hupenyu hwakaderera.
Mubairo waKaycee Madu:
Pasina kupokana, anofanirwa kuwana mari yakawanda sezvo Alberta iri dunhu rakapfuma kwazvo muCanada. Iyo GDP pamunhu capita wedunhu iri C $ 78,154.
Asati asarudzwa muna Nyamavhuvhu 2020, Kaycee Madu anozivikanwa kuti akawana mari inodarika zviuru zana zvemadhora pagore parutivi kubva pakubvisirwa mari nezvipo.
Kunyangwe akawanda masvomhu akavakirwa pamusanganiswa wezvemagariro zvinhu. Chokwadi ndechekuti, anopfuura makore gumi nematanhatu kubvira pahunyanzvi hwebasa. Izvi zvinoita kuti tibvumirane Gistvic Inobatanidza uyo anoti Kaycee Madu's Net Worth inofungidzirwa kuva $ 14.5millon.
Kaycee Madu Chokwadi:
Mukurongedza Biography, ngatitorei nekukurumidza rumwe Ruzivo iwe ungangodaro waisaziva maererano neNigerian-akaberekerwa kuCanada Politician.
Chokwadi #1 - Muenzaniso Wokutevedzera Kunharaunda Yevatema:
Kaycee Madu inhengo inoshingairira yenzvimbo yeAfrica sezvo vazhinji vevaNigeri pamwe nevaAfrica vanogara muCanada vanotarisa kwaari. Kunyangwe Dunia Nur, Mutungamiri weAfrican Canadian Civic Engagement Council anomupembererawo- mumashoko ake;
"Zvakakosha vanhu vatema vanoshanda vane huchokwadi, dzidzo yakanaka uye vanogona kutora nzvimbo iyi."
Chokwadi #2 - Mubairo Wekunaka Mugamuchira:
Muna 2009, padivi pechikwata chaakashanda nacho mukati mevashandi veveruzhinji, vakapa Kaycee Madu iyo Mubairo wePremier weBudiriro muchikamu chemenduru.
Zvakare munaKurume 4, 2020, Kaycee Madu akasarudzwa pakati peMambokadzi Gweta naLieutenant Gavhuna weAlberta.
Waizviziva here?… Gweta raMambokadzi ndiyo kukudzwa kwepamusoro kwakapihwa magweta avo vakaita zvakakosha mukusimudzira mutemo nenzanga.
Chokwadi #3 - Chitendero chaKaycee Madu:
Sevanhu vazhinji vanobva kumhuri yake yemhuri- vanhu veMbaise vanobva kuSoutheast Nigeria, mushumiri weCanada aive nehukama hwakasimba hwechitendero.
Kaycee Madu muKristu uye unogona kuzviona paakapika mhiko muhofisi yaGweta-General aine Bhaibheri.
Kelechi Madu achitora mhiko yekushandira vanhu.
Kaycee Madu Bio Chokwadi
Zita rizere: Kelechi Madu
Zita rekudanwa: Kaycee
Nzvimbo yekuzvarirwa: Imo State, Maodzanyemba-kumabvazuva kweNigeria
Mumwe: Emem Kelechi Madu
Vana: Adanaya, Chisom naUgonna
Basa: Barrister, Gweta uye wezvematongerwo enyika
Dzidzo: Yunivhesiti yeLagos, Nigeria (LL.B)
Hobbies: Nhetembo, Nhabvu uye kufamba
Net Worth: $ Miriyoni 14.5
Kazhinji, kana mumwe munhu achibva kunzvimbo isina hurombo achibudirira muhupenyu, vanhu vakaita saKaycee Madu vanotiyeuchidza nezve kudiwa kwekuomerera.
Pasina mubvunzo, kutsunga kwake kuti abudirire kupokana nezvipingaidzo zvese kwakaita kuti wezvematongerwo enyika weCanada awane kuzivikanwa pasirese.
Ita zvakanaka kugovana zvaunofunga nezve yedu Biography yaKaycee Madu. Isu tinokuvimbisa iwe yakawanda yepamusoro-notch nyaya dzehupenyu kune vakawanda vezvematongerwo enyika veCanada mune ramangwana.